चीनले हिमालय हटस्पटहरुमा अ’तिक्र’मण गर्दै, सगरमाथाको चुचुरोमा चिनियाँ दा’बी ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/चीनले हिमालय हटस्पटहरुमा अ’तिक्र’मण गर्दै, सगरमाथाको चुचुरोमा चिनियाँ दा’बी !
चीनले हिमालय हटस्पटहरुमा अ’तिक्र’मण गर्दै, सगरमाथाको चुचुरोमा चिनियाँ दा’बी !
काठमाडौं। पछिल्लो समय चीनले हिमालय हटस्पटहरुमा अ’ति’क्रमण जारी राखेको छ । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा आँखा गा’डिरहेको चीनले नेपालमाथि पनि आफ्नो हस्तक्षेप कायम गरेको छ । यही क्रममा चीनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा आफ्नो दा’बी गरिरहेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर नेपालमा पर्छ भन्‍ने सर्वव्यापी मान्यता र विभिन्‍न प्रमाणहरु भए पनि चीनले भने सगरमाथाको शिखरलाई सीमा भनेर बताइरहेको छ ।
सगरमाथालाई तिब्बततर्फ चोमोलोङ्‍मा भनिए पनि नेपालतर्फको भागलाई भने सगमाथा नै भन्‍ने गरिन्थ्यो । तर, नेपालतर्फको रहेको सगरमाथालाई पनि चीनले चोमोलोङ्‌मा नामाकरण गरेको छ। यसअघि चीनले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर उचाई मापन गर्नुका साथै ५जी स्थापना समेत गरेको छ । जून १५ मा भारतमाथि आ’क्रमण गरेको चीनले पछिल्ल समय जीपीएस नै परिवर्तन गरेर भारत र नेपालको सीमामा आफ्नो दा’बी कायम गरिरहेको छ।
चीनले नेपाल-चीन र भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा सैन्य संरचनाहरु बनाउनुका साथै सैन्य उपस्थितिसमेत बढाइरहेको छ।नेपालको सगरमाथामा चीनले आफ्नो दा’बी गरिरहँदा पनि नेपालका राजनीतिज्ञ र सरकार सञ्‍चालकहरु भने सत्ता खेलमा व्यस्त छन्।